सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिसंगको वार्ताको निष्कर्ष आउदै, यस्तो भयो आजको वार्ता || सुनौलो नेपाल
सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिसंगको वार्ताको निष्कर्ष आउदै, यस्तो भयो आजको वार्ता
काठमाडौं : २५ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । मंगलबार साँझ सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा सकारात्मक छलफल भएको हो ।
डा. केसीका प्रतिनिधिसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच समझदारी हुने क्रम रहेकाले वार्ता सकारात्मक देखिएको हो । मंगलबारको वार्ता पुनः बुधबार वार्ता बस्नेगरी सकिएको छ ।
बाँकी बिषयमा बुधबार समझदारी हुने सरकारीवार्ता टोली र केसी पक्षले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराएका छन् ।
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक खगराज बराल र केसीका प्रतिनिधिका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. केसीले उठाउनु भएका मागका सम्बन्धमा छलफल भइ धेरै मागहरुमा दुवै पक्षबीच समझदारी हुने क्रममा रहेको र मिति २०७५ साउन ९ गते बिहान पुनः बैठक बसी बाँकी विषयहरुमा सझदारी जुटाउने सहमति भएकाले सार्वजनिक जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।’
मंगलबार केसीको मागबारेमा चौथो चरणको वार्ता भएको हो। करिब पाँच दिन लामो तनावपछि केसी पक्ष सरकारको पुरानै टोलीसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो । यसअघि केसीले कर्मचारीसँग वार्ता गर्दै नगर्ने अडान लिएका थिए । स्रोतका अनुसार नेकपाका नेता सुबास नेम्वाङसँगको अनौपचारिक वार्तापछि औपचारिक वार्ताको वातावरण बनेको थियो ।
मङ्ल, साउन ८, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस